Iindwendwe zeNdwendwe e-India- Umqhubi weBhubaneswar - 91-993.702.7574
Iindwendwe zoKhenketho eNdiya
Ekubeni i-1993, i-Sand Pebbles Tour Tours N Ihambo zihlala zihle kakhulu igosa lokuhamba eOdisha ukubonelela ngokugcweleyo iindwendwe zeIndiya Amava.
Ukufumanisa kwaye ufumane amaxesha aphepheleyo anokunyanzeliswayo kunye nomhlaba ongenakunqunyulwayo welizwe lobugcisa bendalo.
Ubuncinci buhlola, umhlaba ongaziwayo we-northeast ungenakwenzeka ukuba indawo eyimfihlelo yokutyelela kunye neparadesi engachangekanga!
Hlola i-Indiya kunye neendawo zayo zendawo kunye neendawo ze-panoramic, iindwendwe, izitiya zeti kunye nokunye okuninzi.
Hlola kwaye ujonge iindawo ezixhasayo kwihlabathi jikelele ngeendlela eziphambili kwiiphakheji zamazwe ngamazwe.
Amazwi ethu kuMthengi
I-Sand Pebbles enye ye-ejensi yokuhamba ngokugqibeleleyo kwi-Odisha. Siyabulela ngokusuka kuhambo olumangalisayo kubo.
Kwakuyimpumelelo ekhunjulwayo ngeSand Pebbles Tour N Travels. Bacebisa kakhulu!
Enye yezona zihlandlo ezigqwesileyo onokuzifumana ngee-Sand Pebbles Tour N Travels, i-arhente yokuhamba phambili kwi-Odisha.
Uhambo luka-Odisha kunye nathi
Ubomi luhambo. Siyakholwa ukuba uhambo luyakwazi ukuguqula abantu ngeendlela ezingalindelekanga. Misa okwesikhashana kwimihla yakho evulekileyo ukuba ubukele le vidiyo uze uzibonise u-Odisha.
Phila, ufunde, ufumanise kwaye umangaliswe yiyo yonke ubuhle obukhoyo ukuba ufumane. Yiza kwaye ujabule yonke ubuhle kunye neendwendwe eziziThambileyo zaseIndiya ukusuka kwilifa lenkcubeko elicebile ukuya kwizakhiwo ezintle ukuya kwizinto ezithandekayo, ukufumana ama-ecstasy ecocekileyo njengoko senza uhambo lwakho lube luvuyo.